ဘလော့မော်ကွန်း -2စာမျက်နှာ4- mum မှာကွန်ပျူတာပညာရှင်များအစီအစဉ်
မေလ 26, 2018 /in ဘ‌‌လော့ခ်, သတင်း /by cre8or
စီမံခန့်ခွဲမှု၏ Maharishi တက္ကသိုလ်က MS ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်အတွက်သိပ္ပံ-Data ကိုသိပ္ပံအထူးပြုမကြာသေးမီကအိုင်အိုဝါရှိ၎င်း၏မျိုးရဲ့အကောင်းဆုံးသခင်၏အစီအစဉ်သည်အမည်ရှိခံ၏ထူးခြားသောဂုဏ်ထူးရရှိခဲ့သည်။
အားလုံး 290 ၏၎င်း၏ပထမဆုံးနှစ်ပတ်လည်သုံးသပ်ချက်ကိုအလားတူ grad ဒီဂရီရာပူဇော်သက္ကာကို US မှာကျောင်းများအသိအမှတ်ပြု, DataScienceGraduatePrograms.com ကျွန်တော်တို့ကို၎င်း၏စာရင်းတွင်အိုင်အိုဝါများအတွက် #1 ပွဲချင်းပြီးပေးခြင်း, mum အလွန်အကောင်းဆုံးအကြားဖြစ်တွေ့ရှိ 2018 များအတွက်ထိပ်တန်းဒေတာများကိုသိပ္ပံဘွဲ့လွန် Programs ကို.
ဤအကြံပြုချက်များနှင့်အတူတက်လာရန်, သုံးသပ်ရေးလက်ဖြင့် 290 ဒေတာသိပ္ပံမာစတာနှင့်ဘွဲ့ရလက်မှတ်အစီအစဉ်များ၏စာရင်းကိုမှတဆင့်သန့်စင်ပေးရမည်။
Multidisciplinary သို့ချဉ်း ကပ်.
ဒေတာသိပ္ပံ (ရှိသောသစ်ပင်ခြောက်နှင့်ကျန်းမာရေးပညာရေးအပေါ်ဆွဲယူသောမကြာခဏ biostatistics အပါအဝငျအခွားသူမြားမှ) အနည်းဆုံးသူတို့အားလယ်ကွင်းထဲကနေမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဒြပ်စင်အတူတကွရောက်ပြီးသောကြောင့်သူတို့နှစ်ဦးစလုံးအိမ်များကနေပါမောက္ခကတည်ဆောက်အစီအစဉ်များအားလုံးခြေစွပ်ကိုဖုံးလွှမ်းဖို့ပိုဖွယ်ရှိခဲ့အုပ်စိုး၏။
ဒေတာသိပ္ပံ, ဒေတာသိပ္ပံစေသည်လျှို့ဝှက်ချက်ငံပြာရည်, စာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွက် automated ဒေတာအပြောင်းအလဲနဲ့ဒြပ်စင်များအသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့တစ်ဒေတာအဆောက်အဦများအတွက်ပညာရေးနှင့်ဒေတာဘေ့စသီအိုရီပါဝင်သည်ပရိုဂရမ်ရှာဖွေနေကြပါတယ်။
လက်ကမ်းဆက်ဆံရေးနှင့် Non-relational ဒေတာစတိုးဆိုင်များနှင့်အတူအလုပ်ကြောင်းသီအိုရီပညာရေးအပေါ်တည်ဆောက်ရန်, ၎င်းတို့၏အမြင်၌, ကြီးမားတဲ့ပေါင်းခဲ့ကြပါတယ်။ စစ်မှန်သောဒေတာဘေ့စဖန်တီးမှုသို့မဟုတ်ကိုင်တွယ်ရန်လိုအပ်သည်ကြောင်း dedicated data တွေကိုမော်ဒယ်သင်တန်းများနှင့် capstone စီမံကိန်းများကိုလည်းအသုံးဝင်သောပညာရေး၏အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အရိပ်လက္ခဏာရှိကြ၏။
ဒေတာအပြောင်းအလဲနဲ့၏အခြားရှုထောင့် coding ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေတာကိုသိပ္ပံပညာရှင်များ R ကို, Python ကိုနဲ့ Java နဲ့တူအကြီးအကျယ်သည့်အလုပ်အကိုင်အတွက်အသုံးပြုပရိုဂရမ်းမင်းဘာသာစကားများထွင်းထုအသုံးအနှုန်းတွေနဲ့ algorithms မှတဆင့်ဒေတာအဆောက်အဦများအတွက်သိမ်းထားတဲ့အချက်အလက်တွေကိုသူတို့ရဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့ကျင့်ရေး, သက်ဆိုင်ပါသည်။
သူတို့ဟာစစ်မှန်တဲ့, လက်-အပေါ် programming ကိုအလုပ်ပါဝင်သည်ပရိုဂရမ်ရွေးချယ်ထားကြသည်။ အများဆုံးဒေတာသိပ္ပံအစီအစဉ်များ entry ကိုတစ်ခွအေနအေအဖြစ်အချို့သောနိုင်တဲ့ coding အတွေ့အကြုံကိုလိုအပ်သော်လည်း, သူတို့သည်လည်းဘာသာစကားများပိုအထူးပြုရှုထောင့်မှာရှိတဲ့ပညာရေးဆက်လက်နှင့်အချက်အလက်သိပ္ပံမှတိကျတဲ့ coding သောသူတို့ကိုကျောက်မျက်များအတွက်ကြည့်ရှုကြ၏။
ဤသည်ကိုလည်းဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများတွင်အသုံးပြုနောက်ဆုံးပေါ်နည်းစနစ်များလွှမ်းခြုံဖို့တိုးချဲ့။ ဒေတာကိုသတ္တုတွင်းလုပ်ငန်း, စက်သင်ယူမှုနှင့်အဆင့်မြင့် visualization သူတို့အဘို့အကြည့်ရှုအရေးကြီးသောသင်တန်းများဖြစ်ကြသည်။
အဆိုပါညာ Stuff အတူသင်တန်းပို့ချ
ဒေတာကိုသိပ္ပံအသစ်တစ်ခုကိုလယ်ပြင်နှင့်အကြီးအကျယ်မဟုတ်ဘဲသီအိုရီထက်လက်တွေ့တွင်သတ်မှတ်ခံရကြောင်းတဦးတည်းပါပဲ။ ဒါကကြီးမားတဲ့ကစားသမားရောနှောအစိုးရ, စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်ပညာရေးအတွက်တက်ကြွစွာဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုသည်။ ဒါကြောင့်အလုပ်လုပ်ဖို့ကိုဘယ်လိုလေ့ကျင့်ရေးကိုအခြားသူများမှကြွလာသောအခါ, အပြောင်းအလဲနဲ့စုဆောင်းနှင့်ကြီးမားသော data တွေကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာသောစနစ်များကိုအတူလုပ်ကိုင် on-the-မြေပြင်အတွေ့အကြုံကတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောဖြစ်ပါတယ်။
အလုပ်ရှင်များနှင့်သုံးစွဲသူများ၏လက်တွေ့ထည့်သွင်းစဉ်းစားကစားသို့ရောက်ဘယ်မှာပညာရှင်များပြင်ပတွင်အမှန်တကယ်ကမ္ဘာစီမံကိန်းများအတွက်လက်ရှိသို့မဟုတ်မကြာသေးမီအတွေ့အကြုံနှင့်အတူဒြေပါဝင်သည်ပရိုဂရမ်ကိုမြော်လင့်သုံးသပ်ရေးဒါ။ ကြီးမားတဲ့ data တွေကိုအတူလုပ်ကိုင်နေ့ကအလုပ်အကိုင်အခွင့်အနှင့်အတူတွဲဖက်ပါမောက္ခတစ်ဦးကြီးတွေပေါင်းခဲ့ကြပါတယ်။
ဒေတာသိပ္ပံဒါအသစ်ဖြစ်၏ကတည်းကသူတို့အစီအစဉ်များကိုတရားစီရင်ခြင်းငှါအခြို့သော proxy ကိုဒြပ်စင်ကိုကြည့်ရတယ်။ သူတို့ဟာအမြဲစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဂုဏ်သတင်းကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်ကိုကြိုက်နှင့်များစွာသောကိစ္စများတွင်သူတို့အစားတစ်ဦးချင်းစီအစီအစဉ်ကိုယေဘုယျအားမိဘဌာနသို့မဟုတ်ကောလိပ်မှာကြည့်ရှုခဲ့ကြရသည်။ သို့သော်သူတို့ကဂုဏ်သတင်းနှင့်ပြင်ဆင်မှုတစ်ခုညွှန်ပြချက်အတိုင်းဘွဲ့ရနေရာချထားဘို့အကောင့်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါဘူး။
တစ်ဦးသိပ်အငယျဆုံးသောအတိုင်းအတာအထိ, website နှင့်သတင်းအချက်အလက်ရရှိမှုအချက်တစ်ခုကစားခဲ့ပါတယ်။ ဒေတာကိုသိပ္ပံဒေတာမကြိုက်ဘူးနှင့်နည်းပညာတစ်ခုစိတ်ဝင်စားမှုရှိသူတွေကိုထားပါတယ်။ ဒါဟာ 2018 င်နှင့်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဆက်ဆံတစ်ခုပညာရေးဆိုင်ရာဌာနတစ်ခု 12 နှစ်အရွယ် 2001 ၌တညျဆောကျတူကြောင်း website တစ်ခုအတူတူကိုထည့်လေ့မရှိ, ဒါမှမဟုတ်သင်တန်းဖော်ပြချက်နှင့်ပူဇော်သက္ကာများကိုရန်လွယ်ကူအွန်လိုင်း access ကိုမပေးနိုငျသညျ, က run ဖို့အချိန်ပါလျှင် အခြားအလမ်း။
နိုင်ငံတော်အားဖြင့်အလွန်အကောင်းဆုံးမှာ Data သိပ္ပံ Grad Programs ကို
အဆိုပါ Maharishi အစီအစဉ်ကိုပါဝငျကြောင်း core ကိုဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်များနှင့်ပရိုဂရမ်းမင်းကျွမ်းကျင်မှုပေါ်မှာရှိသမျှအလေးပေးနှင့်အတူတစ်ဦးရိုးရာကွန်ပျူတာသိပ္ပံပညာရေးအပေါ်ပထမဦးဆုံးအာရုံစူးစိုက်သော်လည်းစနည်းပညာဆိုင်ရာလေ့လာမှု၏ဤအများဆုံးခေတ်သစ်ဧရိယာနှင့်အတူရိုးရာ Self-ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ပေါင်းစည်းမှုများအတွက်ထူးခြားသောကမ္ဘာကြီးအလယ်ဗဟိုပါပဲ။ ဤနေရာတွင်သက်သေပြဘာဝနာနည်းစနစ်များ၏ပါဝင်မှသာဒီအစီအစဉ်မှာ data တွေကိုသိပ္ပံအစစ်အမှန်ကမ္ဘာအလုပျအတှကျကျောင်းသားများကိုပြင်ဆင်နေအကြောင်းဘယ်လောက်လေးနက်အား။ အပြည့်အဝအကြွေးများအတွက် optional ကို 8 လအလုပ်သင်သင်သည်ဘွဲ့ရလူအပေါင်းတို့ရှေ့မှာ, သင့်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်စစ်မှန်သောအလုပ်လုပ်နေတာစစ်မှန်သောဒေတာသိပ္ပံပညာရှင်များနှင့်အတူတိုက်ရိုက်ထိတွေ့သို့သငျသညျချပြီး, စစ်မှန်သော On-The-အလုပ်အတွေ့အကြုံကိုပေးစွမ်းသည်။
အဆိုပါအခြေစိုက်စခန်းအစီအစဉ်ကိုဆော့ဖျဝဲစနစ်များနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအပေါ်သင်တန်းအထူးပြုနှင့်ဒေတာများသိပ္ပံ option ကို R ကို, Hadoop, Spark, Flume နှင့် HBase နဲ့တူပူ data တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနည်းပညာများအတွက်ကွန်ကရစ်လေ့ကျင့်ရေးနှင့်အတူဤတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိအပေါ် piggybacks ။ အခြားအ NoSQL ချဉ်းကပ်မှုနှင့် AWS နှင့် Cloudera တူသော cloud-based tools တွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ကိုလည်းဆုံးမသွန်သင်ကြသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့, သင်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်မော်ဒယ်ကျွမ်းကျင်မှုသင်ယူဖို့စာသားကို analytics နှင့်အချက်အလက်သတ္တုတွင်းသို့ IBM ၏ SPSS မော်ဒယ်လျှောက်လွှာ, ရေငုပ်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
https://compro.mum.edu/wp-content/uploads/DataScienceGraduatePrograms.com-names-MUM-Best-in-Iowa-2018-1.png 367 300 cre8or https://compro.mum.edu/wp-content/uploads/compro-web-logo-sm.png cre8or2018-05-26 17:36:362019-07-24 16:27:42ဒေတာကိုသိပ္ပံက MS အထူးပြုအိုင်အိုဝါ, 2018 အတွက်၎င်း၏မျိုး၏ထိပ်သခင်၏အစီအစဉ်သည်အမည်ရှိ
ဧပြီလ 18, 2018 /in ဘ‌‌လော့ခ်, သတင်း /by cre8or
အဆိုပါအဘို့ပြီးနောက်နီးပါးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်တစ်နှစ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်သောတုံ့ပြန်မှုက်ဘ်ဆိုက် ကွန်ပျူတာပညာရှင်များအစီအစဉ်SM အဆင်သင့်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါတွေ့ကြုံခံစားဖို့အောက်ကပြထားတဲ့ပုံရိပ်တွေကို click ပေးပါ ထူးခြားတဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှု နှင့် ဆှဲအား သောတိုက်ကြီးနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာသိပ္ပံက MS ပရိုဂရမ်တိုင်းယဉ်ကျေးမှုနောက်ခံအနေဖြင့်တစ်နှစ်လျှင်ထက်ပို 300 ကျောင်းသားများကိုထားပါတယ်။
ကျနော်တို့က်ဘ်ဆိုက်၏အထူးသဖြင့်ဂုဏ်ယူ ဗီဒီယိုများ, mum မှာကျောင်းသားဘဝတစ်ဦးဖိအရသာအပ်သဖြင့်, ရန်သင့်လာအောင်နှိုးဆွတံ့သော လျှောက်ထား ကျွန်ုပ်တို့၏ "ComPro မှSM"ဒီဂရီပရိုဂရမ်တစ်ခု!
ကျောင်းဝင်းဧည့်သည်များ, ကျောင်းသားများနှင့်ဘွဲ့ရသူတို့ရဲ့နေအိမ်-ကွာ-ထံမှ-အိမ်မှာ mum စဉ်းစားပါအဘယ်ကြောင့်ကိုယ်အဘို့ကိုကွညျ့ပါ!
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်သော website တွင်တချို့ကစာမကျြနှာ:
International များအတွက် Paid Internship နှင့်အတူအနိမ့် Entry ကြေး
သငျသညျကိုယ်ပိုင် & အလုပ်ရှာဖွေရေးကြီးထွားစမ်းသပ်ပါလိမ့်မည်
ကျောင်းသားများ Fortune မဂ္ဂဇင်း 500 ကုမ္ပဏီများအတွက် Internship ကျင်းပဖူး
နယူးဒေတာများကိုသိပ္ပံအထူးပြု: Big Data Analytics မှ & စက်သင်ယူ
ယခုကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်သော website ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု.
https://compro.mum.edu/wp-content/uploads/2018-homepage462x284ds.jpg 448 700 cre8or https://compro.mum.edu/wp-content/uploads/compro-web-logo-sm.png cre8or2018-04-18 12:33:322019-07-24 16:29:09နယူး: Computer ကိုပညာရှင်များအစီအစဉ်ကျဘျဆိုကျ
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 3, 2018 /in ဘ‌‌လော့ခ်, သတင်း /by Compro
ကျောင်းသားများ Edge "နွေဦးရာသီမူဘောင်" အသိပညာဖြတ်တောက်ခြင်းရ:
ဒါဟာအတိတ်ဒီဇင်ဘာလ (2017), mum ကွန်ပျူတာသိပ္ပံပါမောက္ခ Payman Salek နွေမူဘောင်များနှင့်ဆက်စပ်နည်းပညာများပေါ်တွင်အထင်ရှားဆုံးညီလာခံဖြစ်သောဆန်ဖရန်စစ္စကိုရှိ "SpringOne ပလက်ဖောင်းညီလာခံ" သို့တက်ရောက်ခဲ့သည်။
2800 + တက်ရောက်, 145 + ဆွေးနွေးပွဲ, 200 + စပီကာ, 32 အဓိကနှင့် 43 စပွန်ဆာနှင့်အတူ, SpringOne ပလက်ဖောင်း 2017 "ရိုးရှင်းစွာအံ့သြဖွယ်!" ခဲ့သူလည်းအပေါ်ပြင်းထန်သောနှစ်ရက်ကြာ, Pre-ကွန်ဖရလေ့ကျင့်ရေးခဲ့တယျ "နွေဦးတိမ်တိုက်။ "
ငါ့ကိုကျောလာနှင့်ကျောင်းသားများနှင့်ဆရာ, ဆရာမများနှင့်အတူအသိပညာဝေမျှဖို့အတှကျပါမောက္ခ Salek အဆိုအရ "ဟု The ညီလာခံတခုလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်လာခဲ့သည်။ ငါညီလာခံမှာလေ့လာခဲ့တဲ့ဆွေးနွေးပွဲနှင့်အကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်. အစီရင်ခံစာ created နှင့်လည်းကိုယ့်ဆောင်းရာသီမှာချိုးစဉ်အတွင်း mum မှာ MSCS ကျောင်းသားများကိုရန် "အဆင့်မြင့်နွေဦးရာသီမူဘောင်ခေါင်းစဉ်များ" ပေါ်တွင်တစ်အပတ်ကနှီးနှောဖလှယ်ပွဲကိုပေး၏ပါပြီ။ တဆယ်ခုနစ်ကျောင်းသားများကိုတက်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့နှင့်အသစ်နွေမူဘောင် features တွေအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလချိုးသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးအပတ်ကနေခဲ့ရသည်။ "
under the hood ကိုနွေဦး Boot ကို,
နွေဦး Boot ကို Actuator
Microservices သို့ Monolith Refactoring
ထပ်ဆင့်တင်ခြင်းနှင့်ပြင်ပ Configuration ကို load
နွေဦး 5.0 နှင့်ရှိသူများအတွက် Programming ဖို့နိဒါန်း
ပါမောက္ခ Salek ဖွငျ့ရရှိခဲ့နွေမူဘောင်၏အသိပညာမကြာသေးခင်ကရက်သတ္တပတ်ကြာမြင့်စွာဆွေးနွေးပွဲအတွက် MSCS ကျောင်းသားတွေနဲ့အတူမျှဝေခဲ့သည်။ ဤသည်ကိုသိသောဥာဏ်လည်း mum မှာလက်ရှိလုပ်ငန်းဗိသုကာပညာသင်တန်းများတွင်ထည့်သွင်းပါလိမ့်မည်။
https://compro.mum.edu/wp-content/uploads/2018_01_news_01.jpg 285 462 Compro https://compro.mum.edu/wp-content/uploads/compro-web-logo-sm.png Compro2018-02-03 20:52:322019-05-31 10:55:51ကျောင်းသားများ Gain ဖြတ်တောက်ခြင်း-Edge အသိပညာ
ဒီဇင်ဘာလတွင် 15, 2017 /in ဘ‌‌လော့ခ် /by Compro
ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာပညာရှင်များ ( "ComPro (SM)") mum မှာက MS အစီအစဉ်အိုင်တီများအတွက်ကျောင်းသားများနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအောင်မြင်မှုပြင်ဆင်နေများအတွက်တကမ္ဘာလုံးလူသိများသည်။
အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပါမောက္ခလိုပဲ, ကွန်ပျူတာသိပ္ပံတွဲဘက်ပါမောက္ခဂျိုး Bruen ဒီထူးခြားတဲ့နှင့်မကြုံစဖူးပညာရေးအတွက်ကြီးမားသောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။
နှစျခုအချက်များကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျောင်းသားတွေဟာ '' အောင်မြင်မှုဆီသို့ဦးတည်
ပါမောက္ခဂျိုး Bruen စာသင်ခန်းသို့ Fortune မဂ္ဂဇင်း 35 ကော်ပိုရေးရှင်းတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်အဆင့်မြင့်အတှေ့အကွုံ 500 နှစ်ပေါင်းတတ်၏။ မိမိအအလုပ်ရှင်များပါဝင်သည်: ဟာ Digital Equipment Corporation က, ဒိုင်ရဲ့ယုံကြည်ကိုးစားပါ, Sprint နှင့်ဝဲလ်တဖက်။ သူလည်းတစ်ဦးလွတ်လပ်သောအတိုင်ပင်ခံအဖြစ်နှစ်ပေါင်းများစွာနေခဲ့ရသည်။
မိမိအရှည်လျားမတူညီအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်ကော်ပိုရိတ်ဗိသုကာရာထူးပါဝင်သည်။ အလုပ်ဒေသများပါဝင်သည်: operating system ဖှံ့ဖွိုးတိုး, အသံအသိအမှတ်ပြုမှု, ကြီးမားတဲ့ကွန်ပျူတာများခြင်း simulation အခြိနျဇယား, မြန်နှုန်းမြင့်ကွန်ရက်ကကိရိယာဂရပ်ဖစ်ဆော့ဖ်ဝဲကိုဖွံ့ဖြိုးရေး, object-oriented DB ဖွံ့ဖြိုးရေး, နှင့်ဝန်ဆောင်မှု-oriented ဗိသုကာ (SOA) ။
အဆိုပါ Transcendental Meditation® technique ကို၏အလေ့အကျင့်
စီမံခန့်ခွဲမှု၏ Maharishi တက္ကသိုလ်မှသားအပေါင်းတို့, ပါမောက္ခများနှင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများနေ့တိုင်း Transcendental တှေးတောဆငျခွ (TM) ကျင့်သုံးပါ။ အဆိုပါဇီဝြဖစ်စဉ်ထဲကနေနက်ရှိုင်းစွာအမြစ်တွယ်ဖိစီးနှင့်တင်းမာမှုသက်သာရာစဉ် TM အလိုအလျောက်တစ်ဦး, ရိုးရှင်းသည့်သဘာဝ, သိပ္ပံနည်းကျ, နှင့်ရှင်းလင်းစဉ်းစားတွေးခေါ်ထုတ်လုပ်ပြသအချိန်ကိုစမ်းသပ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ technique ကိုဖြစ်ပါတယ်, comprehension, စွမ်းအင်နှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုတိုးတက်လာခဲ့သည်။
ရလဒ်အဖြစ်, ကျောင်းသားများပိုပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုခံစား, ပိုကောင်းတဲ့အဆင့်ရ, သူတို့ကပိုမိုလွယ်ကူစွာသင်ယူကြောင်းသတင်းပို့နှင့်ကျန်းမာသန်စွမ်းခြင်းနှင့်ပျော်ရွှင်ကြသည်။
သူတို့ရဲ့နံနက် TM အလိုအလျောက်လုပ်နေတာ MSCS ကျောင်းသားများကို
ကောလိပ်ကျောင်းများတွင် TM အလိုအလျောက်စတင်ပြီးနောက်ပါမောက္ခ Bruen ငါပိုပြီးလျင်မြန်စွာ core ကိုသဘောတရားများကိုနားလည်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်, ငါသည်လည်းပိုပြီးအလွယ်တကူအတူတကွသဘောတရားများကိုချိတ်ဆက်ပေးနိုင်ခဲ့တယ် "လို့ပြောပါတယ်။ TM အလိုအလျောက်သင်သည်အောင်မြင်မှုအဘို့ကြီးစွာသောအခြေခံအုတ်မြစ်ကိုပေးတော်မူ၏။ "
သငျသညျကိုကောင်းစွာလုပ်လိုလျှင် "သင်ပြုဘာမှများတွင်တစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့အုတ်မြစ်အောင်မြင်မှုလို့သဘောမသက်ရောက်သည်။ TM အလိုအလျောက်ကြောင့်ရရှိသွားတဲ့ကဲ့သို့အခြေခံဖြစ်ပါတယ်။ ထွန်းလင်းစိတ်လျော့နည်းစိတ်ဖိစီးမှုပိုမိုအောင်မြင်မှုရရန်ပိုမိုကျန်းမာခန္ဓာကိုယ်ခဲ။ တစ်နည်းအားငါပိုမြန် run & ပိုမိုမြင့်မားခုန်နိုင်ခဲ့သည်။ ဒါဟာကျနော်တို့မှာအများကြီးငါ့ကိုကူညီပေးခဲ့သည်။ "
တစ်ဦးအသိစိတ်ပညာပေးအဖြစ်ပါမောက္ခ Bruen သူ၏ကျောင်းသားများကိုသူ၏အသက်တာဒါကြောင့်ပျော်စရာလုပ်သောအတူတူပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်ပညာရေးအားသာချက်များကိုပေးချင်တယ်။ ဒီတော့ 1973 သူတစ်ဦး Transcendental တှေးတောဆငျခွဆရာမဖြစ်လာခဲ့သည်။ 2014 ၌အကြှနျုပျတို့၏ဒြေပူးပေါင်းကတည်းက Web ကိုလျှောက်လွှာဗိသုကာပညာနှင့်လုပ်ငန်းဗိသုကာအတွက်အဆင့်မြင့်သင်တန်းများဆုံးမဩဝါဒပေးဖို့အပြင်, သူလည်းအများအပြားသစ်ကို MSCS ကျောင်းသားများအား TM အလိုအလျောက်တရားတော်ကိုဟောပြောသွန်သင်ခြင်းကိုနှစ်သက်သူ။
အိုင်တီစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအတွက် Transcendental Meditation® technique ကိုအဘို့လိုအပ်ပါတယ်
အမေရိကန်တစ်ဝှမ်းသူတို့ရဲ့အချိန်ပြည့်လက်တွေ့ကျတဲ့လေ့ကျင့်ရေး Intern များကိုမှာအလုပ်လုပ်ရတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျောင်းသားတွေဟာလည်းသူတို့ရဲ့အဆင့်မြင့်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံပညာရေးကိုဆက်လက်အကွာအဝေးပညာရေးသင်တန်းများကိုအခြိနျပိုငျးယူပါ။ သူတို့ရဲ့အချိန်ဇယားအလွန်တောင်းဆိုမှုများဖြစ်ကြသည်။
ပါမောက္ခ Bruen ရဲ့ကျောင်းသားရဲ့အတွေ့အကြုံရှိတစ်ဦးအဖြစ်: "ငါသည်ဤအံ့သြဖွယ် technique ကို, Transcendental တှေးတောဆငျခွကျွန်မကြုံတွေ့ရှိသမျှတို့သည်တင်းမာမှုကိုလွှတ်, ငါ့သာမန်တည်ငြိမ်တဲ့လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်မှပြန်ပြန်ပြောင်းဖို့ရှိသည်မှဝမ်းသာပါတယ်။ အကြှနျုပျ၏ပုံမှန်နေ့ကယ့်ကို hectic နှင့်စိတ်ကို-မှုတ်အတွေးများနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုအခြေအနေများတွေအများကြီးပါဝင်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ "ငါသည်အကွာအဝေးသင်တန်းများယူပြီးနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအခါသမယအပေါ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်အတူအလုပ်အများဆုံးအလုပ်အကိုင်အရှိလုပ်ပါ။ TM အလိုအလျောက်ငါနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ရှိသည်မြှပြီးနောက်ကြှနျုပျ၏မူရငျးငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်မှေးကွိုစိတ်ထဲပြန် reset ကူညီပေးခဲ့တယ်။ "
ပိုပြီးကျောင်းသားမှတ်ချက်များနှင့်ဗီဒီယိုကြည့်ရှုပါ: Transcendental Meditation®နည်းစနစ်: အိုင်တီပညာရှင်များများအတွက်ယှဉ်ပြိုင် Edge ။
ပါမောက္ခ Bruen ကြှနျုပျတို့၏ website သွားရောက်လည်ပတ်နှင့်ပညာရေးပြောင်းလဲနေတဲ့တစ်ဦးအသက်အဘို့ပြင်ဆင်ခြင်းငှါသူတို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အလုပ်အကိုင်များတိုးတက်စိတ်ဝင်စားအားလုံးကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များဖိတ်ခေါ်ခဲ့။
https://compro.mum.edu/wp-content/uploads/2017_12_news_01.jpg 284 462 Compro https://compro.mum.edu/wp-content/uploads/compro-web-logo-sm.png Compro2017-12-15 21:01:192019-05-31 10:58:14တွေ့ဆုံပါမောက္ခ Bruen
စက်တင်ဘာလ 3, 2017 /in ဘ‌‌လော့ခ် /by Compro
'' ComPro '' ကျောင်းသားများ 111 နိုင်ငံများအသင်း မှစ. Come
1996 ကတည်းကကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း 111 လူအမျိုးမျိုးထံမှအတွေ့အကြုံရှိ software ကို developer များ (အထကျကိုကြည့်ပါ) (mum ရှိရာတည်ရှိသည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ပျူတာပညာရှင်များသည်အမေရိကန်အတွက်မာစတာရဲ့အစီအစဉ်တွင်စာရင်းသွင်းကြပါပြီ အနီရောင်စက်ဝိုင်း အထက်ပါပုံတွင်ဖြစ်ပါသည်။ )
ခစျြစနိုးအဖြစ်လူသိများအဆိုပါအစီအစဉ် '' ComPro, 'အမေရိကန်ကုမ္ပဏီတွေအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အိုင်တီအတွေ့အကြုံနှင့်အတူနောက်ဆုံးပေါ်အဆင့်မြင့်လက်တွေ့ကျသောကွန်ပျူတာသိပ္ပံအသိပညာပေါင်းစပ်ပြီး, အဆင့်မြင့်ပညာရေးအတွက်ထူးခြားတဲ့အခွင့်အလမ်းပေးထားပါတယ်။ တစ်ဦးကတစ်ဦး-of-a-ကြင်နာငွေပေးချေမှုဖွဲ့စည်းပုံမှာ Self-ဘဏ္ဍာရေးနိုင်စွမ်းကောင်းစွာ-paid practicums ကနေကုန်ကျစရိတ်အများစုကိုနှင့်အတူကျောင်းသားများကိုထောက်ပံ့.
ဘွဲ့ရ 2000 နီးစပ်သူများနှင့် 800 + လက်ရှိစာရင်းသွင်းကျောင်းသားတွေနဲ့အတူ, ကွန်ပျူတာသိပ္ပံအတွက် ComPro က MS အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌အကြီးဆုံး, အအောင်မြင်ဆုံးကျောင်းဝင်း-based MSCS အစီအစဉ်များတစ်ခုဖြစ်သည်။
ComPro ကဗီဒီယို: US မှာပရော်ဖက်ရှင်နယ်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူကွန်ပျူတာသိပ္ပံအတွက်မာစတာဘွဲ့ပေါင်းစပ်ကြောင်းအဆင့်မြင့်ပညာရေးအတွက်တစ်ဦးကမူထူးခြားတဲ့အခွင့်အလမ်း
ကျွန်ုပ်တို့၏ဗွီဒီယိုအသစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပေါ် featured ဖြစ်ပါတယ် ပင်မစာမျက်နှာ။ ယူဂန်ဒါ, တရုတ်, အီရန်, အိန္ဒိယ, အီဂျစ်, နှင့်ဘရာဇီး: ကနေခြောက်လလက်ရှိကျောင်းသားများကိုဖွငျ့မှတ်ချက်များ၏အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအနှစ်ချုပ်များရှုပါ။
ယူဂန်ဒါနိုင်ငံကနေ Edwin Bwambele
"ကျွန်မဒီသင်တန်းကိုချစ်ကြတယ်။ ဒါဟာအပေါ်မှာလက်ရဲ့လက်တွေ့ကျတဲ့ရဲ့, ငါ့ practicum ရှာဖွေရေးကာလအတွင်းငါ့ကိုကူညီပေးခဲ့တယ်။ "
"ကျွန်မနေတဲ့အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်ခဲ့သော program တစ်ခုကိုရှာဖွေရုန်းကန်ခဲ့သျောလညျးအကြှနျုပျကိုရညျအသှေးပညာရေးပေးနိုင်ဘူး။ ဒါကြောင့်ငါသည်ဤတက္ကသိုလ်သို့ရောက်ကြ၏။ "
"ငါသည်ဤကဲ့သို့အရာတစ်ခုခုကိုယုံကြည်က-couldn't သံသယငါ program ကိုမွငျလြှငျပထမဦးစွာအချိန်တည်ရှိပေမယ့်သတ္တုတွင်း၏မိတ်ဆွေတစ်ဦးသင်တန်းဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ငါအစီအစဉ်ကိုမှန်ကန်ခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုခဲ့သည်အခါပါပဲ။ "
"ဒီတက္ကသိုလ်ဖဲရ်ဖီးလ်အိုင်အိုဝါ၏သေးငယ်တဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ်။ မြို့ရှိလူအကြီးအဖြစ်ကြသည်။ ပြည်သူ့နေရာတိုင်းပြုံး။ သငျသညျဤမျှလောက်များစွာသောမိုင်ကွာသော်လည်းဒါဟာသင်သည်အိမ်မှာခံစားရစေသည်။ "
"mum မှာငါသည်ငါ့တိုင်းပြည်တွင်ဆည်းပူးခဲ့ကြပါဘူးသိကျွမ်းခြင်းပညာရရှိပါသည်။ ငါအရမ်းပျော်တယ်။ ကျွန်မအလွန်အမင်းထွက်ရှိမည်သူမဆိုဖို့အကြံပြုလိမ့်မယ်။ "
တရုတ်ထံမှဂျူလီယာ Chen က
"ကပညာရှင်ပီသစွာ oriented ကြောင့်ဒီပရိုဂရမ်, ဤမျှလောက်ကြီးစွာသောဖြစ်၏။ "
"ဒီမှာအဆိုပါပါမောက္ခကယ့်ကိုကျောင်းသားများကဂရုစိုက်။ အဆိုပါဒြေအားလုံးသည်အမေရိကန်အလုပ်အကိုင်အဈေးကွက်ထဲမှာဆော့ဖျဝဲအင်ဂျင်နီယာများအဖြစ်အလုပ်လုပ်နေတဲ့ရှည်လျားသောသမိုင်းရှိသည်။ "
"ကျူရှင်ကြေးငါ့အဘို့တော်တော်ကြောက်စရာပါပဲ။ ဒါကတက္ကသိုလ်ချေးငွေများကမ်းလှမ်း, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကငွေကြေးအကြောင်းအများကြီးစိုးရိမ်ပူပန်ရန်မလိုအပ်ပါဘူး။ "
အိန္ဒိယကနေ Shivali ဂျိန်း
"ဒီအနိမ့်ဘဏ္ဍာရေး entry ကိုလိုအပ်ချက်မြင့်မားတဲ့ပညာရေးကိုလိုက်ချင်သူကျောင်းသားများအတွက်အလွန်ကောင်းလှ၏, ဒါပေမယ့်နိုင်ပါတယ်မဟုတ်ကြောင့်ဘဏ္ဍာရေးအခက်အခဲ၏။ "
"ဒီတက္ကသိုလ်ပိတ်ပင်တားဆီးမှု system ကို-သောသင်ရုံဘာသာရပ်သို့နက်ရှိုင်းစွာငုပ်နိုင်ပြီး, သင်သည်အခြားသင်တန်းများသို့မဟုတ်ဘာသာရပ်များအဘို့အစိတ်ဖိစီးမှုအပေါ်ယူစရာမလိုပေနိုင်အောင်, တစ်လလျှင်တစ်ဦးသင်တန်းဖြစ်ပါသည်ရှိပါတယ်။ သောငါ၏ဘွဲ့ကြိုပညာရေး၌အကြှနျုပျနှငျ့အတူဖြစ်ပျက်လေ့ရှိတယ်။ "
"သူတို့က Transcendental တှေးတောဆငျခွပါဝင်သည်® သူတို့ရဲ့သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအတွက် technique ကို။ TM အလိုအလျောက်ငါ၏အအာရုံစူးစိုက်မှုတိုးတက်စေရန်နှင့်စိတ်ဖိစီးမှုသက်သာရာရစေဖို့ကူညီပေးခဲ့တယ်။ "
"ငါသည်အစားအစာကဒီမှာ-စင်ကြယ်သောအော်ဂဲနစ်လတ်ဆတ်တဲ့အစားအစာကိုကြိုက်တယ်။ ငါအိန္ဒိယနိုင်ငံပြင်ပရှိနေအိမ်ဖြစ်ကြောင်းကိုတူသောကျွန်မခံစားရပါတယ်။ "
ကျွန်မတစ်ဦးကိုအမေရိကန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုက high-ပေးဆောင် practicum လုံခြုံရေးအတွက်လိုအပ်အားလုံးကျွမ်းကျင်မှုကြောင့် "ငါ့အဘို့, အဆုံး၌, ပယ်ပေးဆောင်။ သင်နှင့်တက္ကသိုလ်ကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့အ practicum secure အတူတကွအလုပ်လုပ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာတစ် Win-Win အခြေအနေနှင့် practicum ကနေ, သင်သည်သင်၏ပေးဆောင်ချေးငွေ-ဒါတက္ကသိုလ်အနိုင်ရရှိ, သင်အနိုင်ရနှင့်လူတိုင်းပျော်ရွှင်ဖြစ်၏။ "
"သူတို့ကသူတို့ကတိထားတော်အတိအကျအမှုကိုပြု၏။ ကိုယ့်ကြောင့်သက်သေပြနထေိုငျတာပါ။ "
"ဟုအဆိုပါ TM အလိုအလျောက် technique ကို, သင်တစ်ကြိမ်ဘာသာရပ်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ရန်ခွင့်ပြုသည်နှင့်ရုံစိတ်ဖိစီးမှု-အခမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်အမေရိကန်မြို့ငယ်လေးတွင်နေထိုင်သောပိတ်ပင်တားဆီးမှုစနစ်, ၏ပေါင်းစပ်သင် US မှာသင့်ရဲ့ practicum များအတွက်ပြင်ဆင်ထားရန်လိုအပ်သမျှပေးသည် အလုပ်ဈေးကွက်။ ငါ mum ComPro အစီအစဉ်မှဘွဲ့ရခဲ့သည်။ ကမှာပြန်ကြည့်တော့သူကပဲပြီးပြည့်စုံသောသဘောတူညီမှုခဲ့ယခုပြောနိုင်ပါတယ်။ "
"ငါသည်ပြီးသားဘရာဇီးအတွက်ကြီးမားတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ငါကမြင့်မားတဲ့ paid အမေရိကန် practicum ၌ငါ့အတှေ့အကွုံကိုချဲ့ထွင်ချင်တယ်။ "
"ဒီတက္ကသိုလ်အားလုံးကျော်ကနေကြောငျးသား, ဒါကြောင့်အခြားယဉ်ကျေးမှုကနေသင်ယူဖို့အလွန်ကြီးစွာသောအခွင့်အလမ်းပါပဲ။ "
အောက်တိုဘာလ, ဇန်နဝါရီလ, ဧပြီနှင့်သြဂုတ်လ: ကြီးများ ComPro လျှောက်လွှာဝယ်လိုအားထားရှိရန်, နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက်ယခုလေး entries တွေကိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းမဆိုလျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ ကြှနျုပျတို့၏ website သွားရောက်ကြည့်ရှုသို့မဟုတ် ကျေးဇူးပြု. အီးမေးလ်က အသေးစိတျကို။ ငါတို့သည်သင်တို့ထံမှကြားနာဖို့မျှော်လင့်!
https://compro.mum.edu/wp-content/uploads/2017_09_news_01.jpg 286 462 Compro https://compro.mum.edu/wp-content/uploads/compro-web-logo-sm.png Compro2017-09-03 21:42:542019-05-31 10:58:09ComPro ကျောင်းသားများ 111 နိုင်ငံများအသင်း မှစ. Come
သြဂုတ်လ 21, 2017 /in ဘ‌‌လော့ခ်, Uncategorized /by Compro
(ဤ mum ဘရာဇီးကျောင်းသားအသုံးပြုပုံဇူလိုင်လ 24, 2017 ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေထားတဲ့ဆောင်းပါးတစ်ဦးပြန်လည်ပရင့်ထုတ်ရန်ဖြစ်ပါသည် Mauro Nogueira, PMP, LinkedIn တို့အုပ်စု: စီမံခန့်ခွဲမှု၏ Maharishi တက္ကသိုလ်မှကွန်ပျူတာပညာရှင်များ.)
ကျနော်တို့ရှိခဲ့ပါတယ်အတွေ့အကြုံတစ်ခုအဆင့်မြင့်ဒီဂရီဝင်ငွေထက်ကျော်လွန်တတ်၏။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာ၌တစ်ဦး "ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ-အဆင်သင့်" တံဆိပ်ခေါင်းရရှိခဲ့ပါတယ် ... ။
ကမ္ဘာ့ဖလားကို Global ဖြစ်ပါတယ်။ နည်းလမ်းမရှိ! တကယ်လား?
ငါကမလိုအပ်တဲ့အသံ, သိကြပေမယ့်စစ်မှန်တဲ့ပါပဲ။ ကျနော်တို့အသိပညာနှင့်ဆက်ဆံရေးအဘို့အဘယ်သူမျှမနယ်နိမိတ်ရှိသင့်တဲ့ဂြိုဟ်ပေါ်မှာနေထိုင်နေကြရသည်။ သင်ဝေမျှနှင့်အခြားဘက်မှာသောအရာကိုသိရန်အခွင့်အလမ်းများလာတဲ့အခါသင်လူတိုင်းတူညီတဲ့အိပ်မက်တွေ, စိုးရိမ်မှုတွေ, အလိုဆန္ဒများနှင့်မျှော်လင့်ချက်မျှဝေသိမြင်ပါလိမ့်မယ်။
ငါစီမံခန့်ခွဲမှု၏ Maharishi တက္ကသိုလ်မှငါ၏အကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ပညာရှင်များမာစတာဘွဲ့အစီအစဉ်၏ on-ကျောင်းဝင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းစဉ်အတွင်း multi-ယဉ်ကျေးမှုပတ်ဝန်းကျင်ကဝိုင်းခံနေရတို့သည်ကြီးစွာသောအခွင့်အလမ်းရှိခဲ့ပါတယ်။
8 လကြာငါ mum မှာကျောင်းဝင်းအပေါ်အချိန်ပြည့်လေ့လာခဲ့သည်။ ကျောင်းသားခန္ဓာကိုယ်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 70% အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျောင်းသားရေးစပ်ခဲ့သည်။ ငါ၏အ entry ကိုခုနှစ်မှာကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း 94 နိုင်ငံတွေထဲကနေလာမယ့် 20 ကျောင်းသားများကိုခဲ့ကြသည်။
ငါအစဉ်အမြဲငါတွေ့ကြုံခံစားမယ်လို့ထင်ဘယ်တော့မှကြောင်းယဉ်ကျေးမှုနီးကပ်ဖြစ်ခြင်း၏ဤမယုံနိုင်စရာအခွင့်အလမ်းရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျောင်းဝင်းအပေါ်နေစဉ် အာဖဂန်နစ္စတန်, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်, ကမ္ဘောဒီးယား, တရုတ်, ကိုလံဘီယာ, အီဂျစ်, အီရီထရီးယား, အီသီယိုးပီး, ဂါနာ, အိန္ဒိယ, အင်ဒိုနီးရှား, အီရန်, ဂျော်ဒန်, မွန်ဂိုလီးယား, မော်ရိုကို, နီပေါ, ပါကစ္စတန်, ပါလက်စတိုင်း, ဖိလစ်ပိုင်, ပါကစ္စတန်, ရဝမ်ဒါ, ဆော်ဒီ: ငါအပါအဝင်နိုင်ငံများမှသူငယ်ချင်းများကိုဖန်ဆင်းတော် အာရေဗျ, သီရိလင်္ကာ, ဆူဒန်, တူနီးရှား, ယူဂန်ဒါ, ယူကရိန်း, ဥဇဘက်, ဗင်နီဇွဲလား, ဗီယက်နမ်, နှင့်အခြားသူများ။
wow, ဒီငါ "အရည်ပျော်အိုး" ဟုခေါ်သောပါ!
တူအခွင့်အလမ်းရှိခြင်းထူးခြားသည်, သင်တတ်နိုင်သမျှပျော်မွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုအခါငါပြု၏။
ကွဲပြားခြားနားမှုတည်ရှိမည်မျှလည်းငါသည်အခြားယဉ်ကျေးမှုများအကြောင်းအများကြီးသင်ယူ, ငါအမှုအရာငါ့ကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အတူဘုံ၌ရှိကြ၏မည်မျှတွေ့မြင်နိုင်၏။ ဘဝမှာဒီလိုသန့်စင်အတွေ့အကြုံကို။
အနောက်တိုင်း / အမေရိကန်နှင့်အခြားယဉ်ကျေးမှုများနှင့်အတူကျွမ်း။
မွတ်စ်လင်ကြီးမြတ်ဟာသ Teller ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ဟာအလွန်ရယ်စရာဖြစ်ကြသည်။
အားလုံးလီး Genghis Khan ကယ့်သားစဉ်မြေးဆက်ဖြစ်ကြသည်။
အီရန်မှာတော့သူတို့ Arabic အဘိဓါန်မပြောတတ်ပေမယ့်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသည် Persian အဘိဓါန်ထားတဲ့ပါဘူး။
အတော်များများကအာဖရိကနိုင်ငံများဖြစ်သောကြောင့်နိုင်ငံပေါင်းချုပ်အသင်းကြီးအတွက်အီသီယိုးပီးယူဦးဆောင်အခန်းကဏ္ဍဟာသူတို့ရဲ့အလံ (အစိမ်း, အဝါ, အနီ) မှာအတူတူပင်အရောင်များကိုသုံးပါ။ သူများသည်အရောင်များကိုအဲသယောပိအမျိုးသားရေးအလံအတွက်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, လွတ်လပ်သောဖြစ်လာသည့်အခါတခြားနိုင်ငံတွေလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုအရင်းအမြစ်အဖြစ်ဤအရောင်များကိုချမှတ်ခဲ့သေးသည်။
သငျသညျအဘယျဘာသာတရားကိုအရေးမပါဘူး, အဓိကအခြေခံမူတူညီတဲ့နေသောခေါင်းစဉ်: penitence နှင့်အခမ်းအနားအဘို့အချိန်များအတွက်အချိန်ကတခြားအမှုအရာတို့တွင်ရှိမယ့်, သင်ကုသအခြားသူတွေချင်ပါတယ်တူညီတဲ့လမ်းအတွက်အခြားသူများကိုပြုမူဆက်ဆံ, သင်တို့၏ဘုရားသခင်လေးစားပါတယ်။
အကြှနျုပျ၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုပိုကောင်းသို့မဟုတ်ပိုဆိုးဖြစ်သည့်ယဉ်ကျေးမှုဆွေးနွေးရန်မဟုတ်ပါဘူး။ အဘယ်သို့ငါပြသချင်သောသင်ကအခြားဘက်ခြမ်းမှနားထောင်ဖို့သငျ၏စိတျနှလုံးကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာ, သင်အမြင်နှင့်ယုံကြည်ချက်များရဲ့အခြားအချက်နှင့်အတူသဘောမတူလျှင်ပင်သင်ကိုယ်တိုင်အတွက်အတွေ့အကြုံသစ်ဖန်တီးဖို့နဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင့်ထံမှအရာတစ်ခုခုကိုမြင်လျှင် start နိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ သင်တို့အဘို့ရာမှမတူတစ်ရှုထောင့်။
ပိုကောင်းသို့မဟုတ်ပိုဆိုးမျှမရှိတယ်။ အဘယ်အရာကိုတည်ရှိသည့်ကွဲပြားခြားနားသည်။ ငါတို့သည်သူတို့အကွဲပြားခြားနားမှုကိုလေးစားရပေမည်။ ဒါဟာငြိမ်းချမ်းရေး, ညီအစ်ကိုများနှင့် Self-အသိအမြင်တည်ဆောက်နိုင်ရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျနညျးတူ / လုပ်ရပ်မြင်သောအခါသင်ကမကြီးထွားဘူး။ သင်ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေကြိုးစားသောအခါကြီးထွား, သင်၏ရည်မှန်းချက်ကိုရောက်ရှိဖို့အကောင်းဆုံးများထဲမှရွေးချယ်ပါ။
Listen: တက်ကြွစွာနားထောင်သူဖြစ်လိမ့်မည်။ ကိုယ့်အဖြေကိုပွငျဆငျပွီးကိုယျ့ကိုယျကိုခုခံကာကွယ်ဖို့နားမထောင်ပါနဲ့, ဒါပေမယ့်အခြားဘက်ခြမ်းဟုဘာနားလည်ရန်။ ကွဲပြားခြားနားသောယဉ်ကျေးမှုများအများအပြားအခြေအနေများတွင်ပြုမူဖို့ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေရှိသည်။
စာနာမှုရှိသည်: တစ်ခါတစ်ရံကျွန်တော်သူတို့တစ်တွေကွဲပြားခြားနားသောအမြင်ရှိရုံဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တခြားသူတွေနဲ့သဘောမတူ။ အဲဒီအစားကိုယ့်စိတ်ကူးတစ်ခုငြင်းပယ်၏, ရဲ့အခြားဖိနပ်အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချပြီးစမ်းပါ။ ဒီတစ်ခါလည်း view ၏အမှတ်မြင်ကွင်းကွဲပြားခြားနားကြည့်လို့ကွဲပြားခြားနားသည်။
သင်ကရော? သငျသညျ multi-ယဉ်ကျေးမှုပတ်ဝန်းကျင်ကဝိုင်းခံနေရ၏ဤအတွေ့အကြုံကိုခဲ့ဖူးသလော ဘယ်လိုရခဲ့သလဲ ရဲ့ဆွေးနွေးကြစို့ ... ။ 🙂
Mauro Nogueira (စာရေးဆရာမ) နှင့်သူ၏မိသားစု
https://compro.mum.edu/wp-content/uploads/2017_08_news_01.jpg 458 728 Compro https://compro.mum.edu/wp-content/uploads/compro-web-logo-sm.png Compro2017-08-21 21:53:422019-09-05 15:42:14ရုံကွန်ပျူတာသိပ္ပံမဟာထက်ပို
ဇူလိုင်လ 22, 2017 /in ဘ‌‌လော့ခ်, Uncategorized /by Compro
ဇွန်လ 24th တွင်, စီမံခန့်ခွဲမှု၏ Maharishi တက္ကသိုလ်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကနေ 579 / 55 တိုးထက် 1 လူအမျိုးမျိုး-တစ်ဦးထက်ပိုထံမှဘွဲ့ရစံချိန်တင်အရေအတွက်3ပညာသင်နှစ်ဒီဂရီချီးမြှင့်။
ဒီနှစ်ဘွဲ့ရထက်ပို 60% ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘွဲ့ဒီဂရီအတွက်သိပ္ပံမဟာလက်ခံရရှိနှင့် အကြောင်းကို 350 ၏ဤစုစုပေါင်းကွန်ပျူတာသိပ္ပံအစီအစဉ်များအတွက်ကျောင်းဝင်း-based, Non-အွန်လိုင်းသခင်၏အဘို့အသစ်တစ်ခုတစ်ခုတည်းကျောင်းဆင်းပွဲကိုအမေရိကန်စံချိန်ဖြစ်နိုင်သည်။
သောကြာနေ့: Ice Cream လူမှုရေး, ဥယျာဉ်ညစာစားပွဲပါတီ, ဆုပေးပွဲအခမ်းအနား (အောက်တွင်ဓါတ်ပုံကိုကြည့်ပါ)
စနေနေ့: ကျောင်းဆင်းပွဲနေ့ (အောက်တွင်ဓါတ်ပုံကိုကြည့်ပါ)
တနင်္ဂနွေ: နှစ်ပတ်လည်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံပျော်ပွဲစား (ဓါတ်ပုံများ & အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုပါ)
1 ။ အများဆုံးနှစ်နှစ်ကွာခဲ့ကတည်းကသောကြာနေ့, ဇွန်လ 23rd, ဘွဲ့ရကျောင်းသားများ, homecoming တစ်ခုလေထုဖို့, ရှိသမျှအမေရိကန်တစ်ဝှမ်းသူတို့ရဲ့သင်ရိုးလက်တွေ့ကျတဲ့လေ့ကျင့်ရေး Intern များကိုထံမှပြန်လာ၏။
နေ့လည်မှာတော့ပထမဦးဆုံးဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည် ရေခဲမုန့်လူမှုရေး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်လာကျောင်းသားများကိုလက်ရှိကျောင်းသားများကိုမှဖော်ရွေများနှင့်အထောက်အကူဖြစ်စေအကြံဉာဏ်ကိုအများကြီးအပေါ်လွန်ရှိရာလက်ရှိ On-ကျောင်းဝင်းကျောင်းသားများ, အတူ။
ထို့နောက်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည် ထိုဥယျာဉ်ကိုညစာပါတီ ဘယ်မှာဘွဲ့ရ, သူတို့ရဲ့ဧည့်သည်များနှင့် mum ဒြေတစ်အရသာပြင်ပတွင်ပျော်ပွဲစားစားနေချိန်မှာအချင်းချင်းအတူတက်ဖမ်းပျော်မွေ့ခဲ့သည်။
သောကြာနေ့ကအဆိုပါတတိယဖြစ်ရပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှစ်ပတ်လည်မှာညစာအပြီးမှာဖြစ်ပွားခဲ့သည် ကျောင်းဆင်းပွဲဆုပေးပွဲအခမ်းအနားအဘယ်မှာရှိတစ်ဦးချင်းစီဌာနနှင့်ပညာရေးအစီအစဉ်ကိုသူတို့ရဲ့ထိပ်တန်းဘွဲ့ရ (s) ကိုဂုဏ်ပြုခဲ့သည်။ ဤသည်ဒြေနှင့်ထူးချွန်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအားဖြင့်အစဉ်အမြဲအတိုမိန့်ခွန်းတစ်ခုစိတ်ခံစားမှုနဲ့အလွန်အမင်းအထင်ကြီးညဦးယံအချိန်ဖြစ်ပါတယ်။
သောကြောင့် MSCS ဘွဲ့ရများ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်ယခုနှစ်တွင်လေးဘွဲ့ရကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘွဲ့ရအစီအစဉ်တွင်ထူးချွန်ကျောင်းသားဆုပေးခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထူးချွန်ကျောင်းသားကျောင်းသူများဖြစ်ကြသည်: ရှမွေလသည် Bacha Heye (အီသီယိုးပီး), Manoj Shrestha (နီပေါ), Kashif Shabih (ပါကစ္စတန်), နှင့် Achal ဂျိန်း (အိန္ဒိယ) ။ ဂုဏ်ယူပါတယ်!
2 ။ စနေနေ့, ဇွန်လ 24th ခဲ့သည် ကျောင်းဆင်းပွဲနေ့အဆိုပါ Argiro ကျောင်းသား Center မှာနံနက်ယံ၌ကျောင်းသားနှင့်လူတန်းစားဓာတ်ပုံများဘွဲ့ရနှင့်အတူ -starting ။
နေ့လယ်စာကိုအောက်ပါတို့သည်တင်သည့်အခမ်းအနားကိုအဆိုပါ 3-ရက်ပေါင်း '' ပွဲတော်မီးမောင်းထိုးပြ။
ဒီနှစ်မှာတော့ရဲ့ဘွဲ့နှင်းသဘင်စပီကာဟာဂုဏ်ထူးဆောင်တိရိုင်ယန်အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်ကနေကိုယ်စားလှယ်ကအမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်။ အောက်လွှတ်တော်အမတ်ရိုင်ယန် 2003 ကတည်းကအောက်လွှတ်တော်အတွက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်နှင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလက်လှမ်းမီတိုးတက်အောင်ကောလိပ်ပိုပြီးတတ်နိုင်စေရန်နည်းလမ်းများမြှင့်တင်ရန်နှင့်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကိုတိုးချဲ့အတွက်အမျိုးသားရေးခေါင်းဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍကိုယူခဲ့ပါသည်။
သူ Transcendental Meditation® technique ကို၏အကျိုးကျေးဇူးများအကြောင်းကိုအသိအမြင်လည်းထမြောက်တော်မူပြီ, နှင့်စစ်ပြန်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရာပေါင်းများစွာကလက်လှမ်းအောင်လုပ်ဆောင်နေသည်။
အမြားအပွားကိုကြည့်ပါ ဓာတ်ပုံများ မှ ကျောင်းဆင်းပွဲနေ့ ဒီမှာ.
3 ။ တနင်္ဂနွေကွန်ပျူတာသိပ္ပံဦးစီးဌာနရဲ့အဆုံး-of တစ်နှစ်ဖြစ်ခဲ့သည် ပျော်ပွဲစား အနီးအနား Waterworks Park မှာ။
အရသာအစားအစာအကြိုက်ဆုံးဒေသခံစားသောက်ဆိုင်ကနေယူဆောင်အပေါင်းတို့နှင့်တကွ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒြေ, ဝန်ထမ်းများ, ဘွဲ့ရ, လက်ရှိကျောင်းသားများ, နှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများကိုဖော်ရွေ, အပြိုင်အဆိုင်ဂိမ်းများနှင့်ပြင်ပနွေရာသီအပန်းဖြေလှုပ်ရှားမှုများခံစားခဲ့သည်။
အမြားအပွားကိုကြည့်ပါ ဓာတ်ပုံများ မှ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံပျော်ပွဲစား ဒီမှာ.
***သင်မြင်ကြပြီမဟုတ်ခဲ့လျှင် ပျော်ပွဲစား ဗီဒီယို, မြင်ရရန်သေချာစေပါ ဒီမှာ. ***
https://compro.mum.edu/wp-content/uploads/IMG_4263_462x284.jpg 312 490 Compro https://compro.mum.edu/wp-content/uploads/compro-web-logo-sm.png Compro2017-07-22 22:00:282019-09-05 15:42:26ကွန်ပျူတာသိပ္ပံမဟာကျောင်းဆင်းများ၏စံချိန်အရေအတွက်
မေလ 22, 2017 /in ဘ‌‌လော့ခ်, Uncategorized /by Compro
အရှေ့အာရှရွေးချယ်ခန့်အပ်ရေးခရီးစဉ်: Computer ကိုပညာရှင်များမာစတာရဲ့အစီအစဉ်
အဆိုပါကွန်ပျူတာပညာရှင်များစီမံခန့်ခွဲမှု၏ Maharishi တက္ကသိုလ်မှမာစတာရဲ့အစီအစဉ် 1777 80 ကတည်းက 1996 လူအမျိုးမျိုးထံမှဘွဲ့ရများနှင့်ထက်ပို 1000 လက်ရှိကျောင်းသားတွေနဲ့အတူ, United States မှာအများဆုံး, ထူးခြားတဲ့လူကြိုက်များနှင့်အောင်မြင်သောကွန်ပျူတာသိပ္ပံက MS ပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုတစ်ဦးဘွဲ့ရအဆင့်၏အဆင့်မြင့်ပညာရှင်များပေါင်းစပ် ကွန်ပျူတာသိပ္ပံအတွက်မဟာဘွဲ့ အမေရိကန်အတွက်အဆင့်မြင့်နည်းပညာဆိုင်ရာကုမ္ပဏီလက်တွေ့ကျတဲ့ applications များနှင့်အတူ။
မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များနှင့် applications များ၏ထောင်ပေါင်းများစွာတုံ့ပြန်ငါတို့သည်အရှေ့အာရှကနေနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းခံယူ, Greg Guthrie, Ph.D ဘွဲ့ကိုကွန်ပျူတာသိပ္ပံ, ပညာရေးဆိုင်ရာနည်းပညာမဟာဌာနမှူး, နှင့်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံပါမောက္ခများနှင့်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံအစီအစဉ်ဒါရိုက်တာ၏ကျောင်း, ဒင်းဂုဏ်ထူးဆောင် Elaine Guthrie ခရီးသွားပါလိမ့်မည် ဗီယက်နမ်, မွန်ဂိုလီးယား, တရုတ်, ဖိလစ်ပိုင်နှင့်စင်္ကာပူ မေလလယ်ကနေဇွန်လ 2017 မှတဆင့်ချင်းစီလူမျိုးထဲတွင်အလားအလာကျောင်းသားများနှင့်ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်များနှင့်တွေ့ဆုံရန်။
ha Noi: မေလ 19th, (6: 30-8: 30 pm တွင်): Khach စန်း Ha Noi D8, Giang Vo လမ်း, ဦးဘ Dinh Dist ။ ha Noi ။ သင့်ရဲ့အဘို့အမှတ်ပုံတင်မည် အခမဲ့လက်မှတ်တွေ ဒီဖြစ်ရပ်ပါ။
da Nang: မေလ 21st, (9: 00 AM - 10: 30 လေး): 16 သည် Le Thanh ကတန်ချိန်ရပ်ကွက် Hai ကချိုင် 1, ခရိုင် Hai ကChâu။ Tp Da Nang ။ သင့်ရဲ့အဘို့အမှတ်ပုံတင်မည် အခမဲ့လက်မှတ်တွေ ဒီဖြစ်ရပ်ပါ။
HoChiMinh City,: မေလ 24th, (6: 30 pm တွင် - 8: 30 pm တွင်): 68 Vo သီ sau လမ်း, 5th ညီထပ်, Tan က Dinh ရပ်ကွက်, ခရိုင် 1 ။ HoChiMinh City, ။ သင့်ရဲ့အဘို့အမှတ်ပုံတင်မည် အခမဲ့လက်မှတ်တွေ ဒီဖြစ်ရပ်ပါ။
HoChiMinh City,: မေလ 26th, (6: 30 pm တွင် - 8: 30 pm တွင်): TM အလိုအလျောက်ရေးစင်တာ, 4th ကြမ်းပြင်, y Ban ရုံးအဆောက်အအုံ, 69-71 Thach သီ Thanh က, Tan က Dinh ရပ်ကွက်, ခရိုင် 1 ။ HoChiMinh City, ။ သင့်ရဲ့အဘို့အမှတ်ပုံတင်မည် အခမဲ့လက်မှတ်တွေ ဒီဖြစ်ရပ်ပါ။
အူလန်ဘာတာ: မေလ 28th, (2: 00 pm တွင် - 4: 00 pm တွင်): Eduworld ပညာရေးစင်တာ, 2nd ညီထပ်, ARD Ayush ရိပ်သာ အူလန်ဘာတာ 16060 ။
အူလန်ဘာတာ: ဇွန်လ 3rd, (1: 00 pm တွင် - 4: 00 pm တွင်): အမျိုးသားသတင်းအချက်အလက်နည်းပညာပန်းခြံ; Sukyhbaatar ခရိုင်, Baga toiruu-49 ။ အူလန်ဘာတာ-21646 ။
ဘေဂျင်း: ဇွန်လ 11th, (2: 00 pm တွင် - 6: 00 pm တွင်): Zhongguancun ဖွံ့ဖြိုးရေးအဆောက်အအုံ, အမှတ် 12 Xinxi လူး, Shangdi, Haidian ခရိုင်, ဘေဂျင်း။
မနီလာ: ဇွန်လ 24th, (1: 00 pm တွင် - 4: 00 pm တွင်): Tropicana Suites, 1630 လူးမာရီယာ Guerrero လမ်း Malate, မနီလာဖိလစ်ပိုင် 1004 ။ သင့်ရဲ့အဘို့အမှတ်ပုံတင်မည် အခမဲ့လက်မှတ်တွေ ဒီဖြစ်ရပ်ပါ။
စီဘူး: ဇူလိုင်လ 1st, (9: 00 AM - 12: 00 pm တွင်): Maxwell ဟိုတယ်, N. Escario စိန့်, စီဘူစီးတီး။ သင့်ရဲ့အဘို့အမှတ်ပုံတင်မည် အခမဲ့လက်မှတ်တွေ ဒီဖြစ်ရပ်ပါ။
စီဘူး: ဇူလိုင်လ 1st, (1: 00 pm တွင် - 4: 00 pm တွင်): Maxwell ဟိုတယ်, N. Escario စိန့်, စီဘူစီးတီး။ သင့်ရဲ့အဘို့အမှတ်ပုံတင်မည် အခမဲ့လက်မှတ်တွေ ဒီဖြစ်ရပ်ပါ။
စင္ကာပူႏုိင္ငံ: ဇွန်လ 27th, (6: 00 pm တွင် - 9: 00 pm တွင်): အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပလာဇာ, 10 Anson လမ်း, # 36-05A, စင်္ကာပူ 079903 ။ သင့်ရဲ့အဘို့အမှတ်ပုံတင်မည် အခမဲ့လက်မှတ်တွေ ဒီဖြစ်ရပ်ပါ။
https://compro.mum.edu/wp-content/uploads/greg-elaine_8014_462x284.jpg 284 462 Compro https://compro.mum.edu/wp-content/uploads/compro-web-logo-sm.png Compro2017-05-22 22:26:462019-09-05 15:42:57အရှေ့အာရှရွေးချယ်ခန့်အပ်ရေးခရီးစဉ်
ဇန်နဝါရီလ 27, 2017 /in ဘ‌‌လော့ခ် /by Compro
ဒေတာများကိုစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်ကြီးမားကြီးထွားလာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကိုဘို့ငါတို့ကျောင်းသားများကိုပြင်ဆင်ထားရန်, mum ယခုကွန်ပျူတာသိပ္ပံနှင့်သင်္ချာကျောင်းသားတစ်ဦးမှာ Data သိပ္ပံ Track ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ဖြစ်ပါတယ်။
mum ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဦးစီးဌာနအဆိုအရ ပါမောက္ခ Emdad Khan က:
ဒီနေ့ရဲ့ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်မောင်းနှင်ကမ္ဘာကြီးကိုလွှမ်းမိုးထားတဲ့ "ဒေတာများကိုသိပ္ပံ,, စာသားအချက်အလက်များ, Multi-မီဒီယာဒေတာ, ထောက်လှမ်းရေးများနှင့်စက်သင်ယူနေဖြင့်မောင်းနှင်ပါလိမ့်မည်သည့် Next ကိုမျိုးဆက်ကျောင်းသားများသည်အင်တာနက်များအတွက် key ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့သဘာဝဘာသာစကားကိုကွန်ပျူတာနှင့်သိမှုကွန်ပျူတာစွမ်းရည်အများကြီးဆွဲဆောင်မှု applications များဖန်တီးပါလိမ့်မယ်။ "
အဆိုပါဒေတာများကိုသိပ္ပံ Track စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကမ္ဘာအနှံ့မှာ Data သိပ္ပံပညာရှင်များနှင့်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဖို့ဒေတာကိုအရာရှိ (CDO) အဖြစ်အလုပ်အကိုင်များဘို့ငါတို့ကျောင်းသားများနှင့်ဘွဲ့ရပြင်ဆင်မည်ပါလိမ့်မယ်။
ဒေတာများကိုသိပ္ပံရဲ့ Power: (ထံမှ Dataversity)
လူ့ပင်ကိုယ်နှင့်အတွေ့အကြုံနှစ်ဦးစလုံးကျရှုံးအခါအနာဂတ်နှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုအတိအကျကိုခန့်မှန်းစေပါနိုင်သလား
ယခင်ကဒေတာများကိုသိပ္ပံ၏တန်ခိုးကန့်သတ်ထားကြောင်းသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ၏ကန့်သတ်မှု eroding နေကြပြီး, ဒေတာစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်အချို့အဓိကပြောင်းလဲမှုများကို 2017 အတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဒေတာများကိုသိပ္ပံအလေ့အကျင့်ကတဆင့်လှည်းဖို့မျှော်လင့်ထားနိုင်သည်
'' အရာ၏အင်တာနက်က '' အောင်နိုင်ရိုးရာစီးပွားရေးထောက်လှမ်းရေးမှ Data Streams
Big Data နည်းပညာအသုံးစရိတ် Boom ပါလိမ့်မယ်
Hadoop Market က persistent တိုးတက်ကြီးပွားပါလိမ့်မယ်
ဒေတာကိုသိပ္ပံ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုထောက်လှမ်းရေးနှင့် Analytics မှဆောင်လွှမ်းမိုးဦးမည်
Enterprises ၏ 25% တစ်ထမ်းခေါ်ယူမှုပါလိမ့်မယ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဖို့ဒေတာကိုအရာရှိ (CDO) 2017 အတွက်
သင်္ချာနှင့်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံကျောင်းသားကလက်ရှိ DS သင်တန်းများပါဝင်သည်: Big Data, Big Data Analytics မှနှင့် စက်သင်ယူ။ မဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်ကာလ၌ကျွန်ုပ်တို့သည်သဘာဝဘာသာစကားများထုတ်ယူခြင်းနှင့် Artificial Intelligence အပါအဝင်ပိုပြီးသင်တန်းများထည့်သွင်းဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။
https://compro.mum.edu/wp-content/uploads/datascience_wordcloud_462x284.jpg 393 640 Compro https://compro.mum.edu/wp-content/uploads/compro-web-logo-sm.png Compro2017-01-27 22:51:032019-05-31 10:57:50ဒေတာကိုသိပ္ပံ Track Added သင်ရိုးညွှန်းတမ်း mum မှ
ဒီဇင်ဘာလတွင် 12, 2016 /in ဘ‌‌လော့ခ် /by Compro
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပညာရေးအတွက်နိုင်ငံခြားခရီးသွားများအတွက်တိုးမြှင့်အခွင့်အလမ်းနှင့်အတူအချို့သောတစ်လောကလုံးကျောင်းသားအားလုံးအားဖြင့်မျှဝေစိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများ ... ရှိပါတယ်။ အမေရိကန်တက္ကသိုလ်လုံခြုံတော်မူမည်လော ငါပျော်ရွှင်တော်မူမည်လော ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုထံမှကုန်ကျစရိတ်နှင့်ခွဲခြာတန်ဖိုးရှိတော်မူမည်လော ဒါကြောင့်ငါ့အသက်ကိုတိုးတက်စေလိမ့်မည်နည်း
1996 ကတည်းက 2800 လူအမျိုးမျိုးထံမှခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 80 ဆော့ဖျဝဲအင်ဂျင်နီယာများအတွက်ကျောင်းအပ်ရန်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဗဟို၌ဖဲရ်ဖီးလ်အိုင်အိုဝါမှစွန့်ကြ ကွန်ပျူတာပညာရှင်များအစီအစဉ် စီမံခန့်ခွဲမှု၏ Maharishi တက္ကသိုလ်တွင်။ ဤအကျောင်းသားများအသီးအသီးကဤတူညီသောမေးခွန်းများနှင့်မျှော်လင့်ချက်နှင့်အတူရောက်လေပြီ။
"ဟုအဆိုပါ mum ကျောင်းဝင်းမှလာမယ့်နောက်, ငါလှည့်ပတ်ဟာအလွန်အပြုသဘောဆောင် ambiance ခံစားရတယ်။ လူတိုင်းကအရမ်း, ဖော်ရွေအထောက်အကူဖြစ်စေနဲ့တပ်လှန့်သည်။ အဆိုပါပါမောက္ခအပြုသဘောဆောင်တဲ့စွမ်းအင်ဖြာနှင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုမှာထင်ဟပ်။ အဆိုပါကျောင်းဝင်းပတ်ဝန်းကျင်အားလုံးစိတ်အညစ်အနေဖြင့်အခမဲ့, ဒါကြောင့်သန့်ရှင်း၏။ ငါကဒီမှာတကယ်ပျော်ရွှင်လုံခြုံဟုခံစားရ။ "-Nirali Bheda (အိန္ဒိယ)
ငါကွန်ပျူတာသိပ္ပံ၌ငါ့မာစတာများအတွက်အမေရိကန်ရွေးချယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အခါ ", ပညာရေး၏အရည်အသွေးအပြင်, ငါသည်အရာအရပ်ကိုပါလိမ့်မယ်ပုံကိုဖော်ရွေများနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံစိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့သည်။ ဒီနေရာမှာလာမယ့်နောက်မှငါသဘောပေါက် ဒီထက် friendlier မရနိုငျဖွဒြေအဖြစ်သူချင်းကျောင်းသားများအစူပါဖော်ရွေဖြစ်ကြပြီးကျွန်မအိမ်မှာခံစားရတယ်။ ကျနော်တို့လူတန်းစား, ကျောင်းဝင်းဖြစ်ရပ်များ, နှင့်မိတ်ဆွေများမှအနီးကပ်နေဒါကျနော်တို့အပေါ်-ကျောင်းဝင်းနေထိုင်နေကြရသည်။ ဖဲရ်ဖီးလ်၏တပြင်လုံးကိုတစ်ဦးအလွန်နိမ့်ရာဇဝတ်မှုနှုန်းသည်နှင့်အတူအသက်ရှင်ဖို့ရန်အလွန်လုံခြုံနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ "-Chandillyan (သီရိလင်္ကာ)
"ငါနွေးထွေးမှု, ပျော်ရွှင်မှုကို, မေတ္တာနှင့်တစ်ဦးခင်မင်ရင်းနှီး, နိုင်ငံတကာမိသားစုခံစားခဲ့ရဘယ်မှာ mum မှာလေ့လာရန်အလွန်ပျော်ရွှင်ခဲ့ပါတယ်။ ငါသိနှင့်စူပါဖော်ရွေများနှင့်ကောင်းတဲ့နေသော mum မှာအားလုံးလူတို့နှင့်အတူအသက်ရှင်စေခြင်းငှါလာပြီကံကောင်းခံစားရတယ်။ အဆိုပါအနိမ့်ဖိအားကိုလေ့လာဘို့ပြီးပြည့်စုံပတ်ဝန်းကျင်ဖန်တီးပေးပါတယ်။ အဲဒီမှာကြီးတွေကိုနိုင်ငံတကာမိသားစုလက်လွတ်လျက်, သငျသညျငါ့မိသားစုအားလုံးကိုအကောင်းဆုံးဆန္ဒရှိကြဘူး။ :) "-Xiaowei ဝမ် (တရုတ်)
"ဖဲရ်ဖီးလ်ကအကြီးအအလှအပနှင့်အတူတိတ်ဆိတ်တဲ့, ငြိမ်းချမ်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရှိပြီး, ဒီမှာကလူနွေးထွေးကြည်နူးဖွယ်ဖြစ်ကြသည်။ ဒါကအသိုင်းအဝိုင်းကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်ပါသည်။ ငါကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများမှလူတို့နှင့်အတူမိတ်ဆွေများကိုရာ၌ခန့်ထားပြီ, ဒီမှာကမေတ္တာရှင်နေပါတယ်။ ငါစွန့်ခွာလာသောအခါငါသည်ဤတွေအများကြီးလက်လွတ်ကြလိမ့်မည်။ "-Stanley Kariuki (ကင်ညာ)
"mum မှာဖြစ်ခြင်း Home-လုံခြုံငြိမ်းချမ်းသောမှာဖြစ်ခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်၏။ " -Revanth Kunchakurti (အိန္ဒိယ)
"ဒီမှာအားလုံးကလူကအရမ်းဖော်ရွေဖြစ်ကြပြီးငါကဒီမှာလုံခြုံခံစားရတယ်။ ငါလာမီ, ငါဝေးငါ့မိသားစုထံမှဖြစ်ခြင်းငါ့အဘို့အလွန်ခက်ခဲလိမ့်မယ်လို့ထင်ကြတယ်။ ငါသည်ငါ့မိသားစုလက်လွတ်ပေမယ့်, ဒီမှာငါအသစ်တစ်ခုမိသားစုရှိတယ်။ "-အမည်မသိ (အီရန်)
"တင့်တယ်ကျောင်းဝင်း, ငြိမ်းချမ်းသောမြို့, ကြင်နာလူများ, လတ်ဆတ်တဲ့လေကောင်းလေ, ကျန်းမာအစားအစာ, အသကျရှငျဖို့အံ့သြဖွယ်ရာအရပျမြားနှငျ့လေ့လာမှု။ ဒါဟာကောငျးကငျဘုံပါပဲ။ ဖြစ်နိုင်ပါလျှင်ငါပင်ကဒီမှာငါ့အသက်ကို၏ကျန်အသက်ရှင်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ "- Chunming Cao (တရုတ်)
"ဖဲရ်ဖီးလ်ဟာအလွန်ငြိမ်းချမ်းစွာနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ တစ်မိသားစုလိုပဲလူတိုင်းကိုတစ်ဦးချင်းစီကတခြားသိတယ်။ လူတိုင်းတစ်စုံတစ်ဦးရဲ့တစ်နေ့တာလုပ်ဖို့လုံလောက်တဲ့ရဲ့အခြားသူတွေ-များအတွက်လက်ဆောင်အဖြစ်သူတို့ရဲ့အပြုံးပေးသည်။ ထိုအ mum သမျှသောဤသတင်းရင်းမြစ်၏စိတ်နှလုံးသည်။ ငါသည်ဤတက္ကသိုလ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်စဉ်းစားဂုဏ်ယူခံစားရတယ်။ ဤအရပ်၌ငါအသစ်များကိုဖြစ်ကြောင်းကိုပေမယ့်, ငါကဒီမှာပိုင်ကြောင်းခံစားရ။ "-Md ။ Zahedul Khan က (ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်)
"mum အလွန်ငြိမ်းချမ်းသော-အပြည့်အဝလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှဖော်ရွေကျောင်းသားများဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာအံ့သြစရာဖြစ်ပါတယ်။ "-Tsengel Gerelsaikhan (မွန်ဂိုလီးယား)
"ဖဲရ်ဖီးလ်ကတိတ်ဆိတ်တဲ့, လုံခြုံ, ငြိမ်းချမ်းသောမြို့ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူ့အလွန်ဖော်ရွေဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာသုတေသနနှင့်လေ့လာနေဘို့ပြီးပြည့်စုံပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့။ "-vu Pham (ဗီယက်နမ်)
"ငါသည်ဖဲရ်ဖီးလ်တှငျနထေိုငျသူမြားလူတိုင်း၏ငြိမ်းချမ်းသောသဘောသဘာဝတန်ဖိုးထားတယ်။ ငါသည်တကျွန်းတနိုင်ငံသားဖြစ်ကြောင်းကို, ဒါပေမဲ့သူတို့ကောင်းစွာတူသောမိတ်ဆွေတစ်ဦးငါ့ကိုဆက်ဆံပါ။ ပါမောက္ခပဲသင်၏မိတ်ဆွေများကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏။ ဤသည်အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ဒါကြောင့်ယခုအချိန်အထိကျွန်မပါမောက္ခမျ့ဘဲလျနှင့်ဒေါက်တာ Guthrie ကနေခေတ်သစ် programming ကိုအခြေခံမူအများကြီးသင်ယူဖို့အခွင့်အလမ်းရခဲ့တယ်။ သူတို့ကသင်ကြားမှုအတွက်အစွမ်းထက်ဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါဒြေများ၏စွမ်းအင်ငါ့ကိုစိတ်အား။ "-အမည်မသိ (အီရန်)
"ငါသည်ဤအရပ်၌နှင့်တက္ကသိုလ်ကိုချစ်။ mum နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကောင်းဆုံးအရာလေ့ကျင့်ကြောင့်, ကမ္ဘာပေါ်မှာလုံးဝထူးခြားသောင်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ TM® technique ကို ငါ၏အပညာရေးနဲ့ငါ့ဘဝကိုဆက်သွယ်။ mum မှာလူတိုင်းထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်မေတ္တာရှင်, အထောကျအကူဖြစ်ပါတယ်။ mum ကြီးမားတဲ့မိသားစုဖြစ်ပြီး, ငါသညျဤမိသားစုထဲမှာဖြစ်နိုင်အောင်ဝမ်းသာတယ်။ "-Rajendra Joshi (နီပေါ)
"mum မှာကျန်းကျန်းမာမာနဲ့စိတ်ပြေလျော့သွားပတ်ဝန်းကျင်အလုပ်များမြို့အလုပ်ခွင်ကနေဆုတ်ခွာနေဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူ့ (ပင်သူစိမ်း) ကောင်းတဲ့နှင့်ဖော်ရွေဖြစ်ကြသည်။ အလွန်နိမ့်ရာဇဝတ်မှုနှုန်းမှာရှိပါတယ်။ အဆိုပါကျောင်းဝင်းငါကဲ့သို့သောသဘာဝ-ချစ်မြတ်နိုးတဲ့အဘို့အလွန်ကောင်းတဲ့အရာ, လမ်းကြောင်း & ရေကန်များလမ်းလျှောက်ခြင်းဖြင့်ဝိုင်းရံထားသည်။ ငါထှနျးအော်ဂဲနစ်အစားအစာပျော်မွေ့။ "-မင်းသမီး Dianne Bungay (ဖိလစ်ပိုင်)
"mum မှာဖြစ်ခြင်းငါ့အဘို့တကယ်အတွေ့အကြုံကောင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာကမ္ဘာတဝှမ်းကနေသူငယ်ချင်းဒြေနှင့်ဝန်ထမ်းများ၏ကုမ္ပဏီခံစား, ကြီးစွာသောမတူကွဲပြားမှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်အံ့သြဖွယ်ပါပဲ။ ဖဲရ်ဖီးလ်ကအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့လူတို့နှင့်အတူတစ်အံ့သြစရာနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ နေရာတိုင်းငါသွား, အစဉ်မပြတ်ငါကြိုဆို, သူတို့ရဲ့မျက်နှာများပေါ်မှာအပြုံးများနှင့်အတူလူကြည့်ပါ။ ဒါဟာကျောင်းသားတစ်ဦးထူးဆန်းသောနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ "-Sanjeev Khadka (နီပေါ)
"ငါသည်ဖော်ရွေပတ်ဝန်းကျင်ကိုချစ်နှင့်ကျောင်းသားများနှင့်ဝန်ထမ်းများကြိုဆိုပွဲ, အိမ်ကဲ့သို့သဘောထားက။ ငါသည်လည်းဖဲရ်ဖီးလ်ဒလူမျိုး၏ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကိုအရမ်းလေးစားမိပါတယ်။ "-Adebayo Ajibade (နိုင်ဂျီးရီးယား)
"ကျနော့်အမြင်တွင်, ဒီမှာအသိုင်းအဝိုင်းသည်အလွန်အံ့သြဖွယ်ပါပဲ။ သင်တို့သည်နောက်ကာလ၌မိတ်ဆွေများကိုအောင်ကိုစတင်ပါ။ mum ရဲ့ကျောင်းဝင်းအံ့သြဖွယ်ဖြစ်ပြီး, ဖဲရ်ဖီးလ်က၎င်း၏တိတ်ဆိတ်ခြင်းနှင့်မေတ္တာရှင်လေထုထဲတွင်အံ့မခန်းဖြစ်ပါတယ်။"-Akram Malkawe (ဂျော်ဒန်)
"ကျွန်မအပေါငျးတို့သဒြေအလွန်ကြင်နာရှိရာနိုင်ငံအများအပြားမှကျောင်းသားတွေနဲ့အတူအလွန်ဖော်ရွေကျောင်းဝင်းအသိုင်းအဝိုင်းကြုံတွေ့ကြသည်။ ငါကအရမ်းအကျိုးရှိခြင်းနှင့်ပျော်စရာရှာတွေ့သော TM အလိုအလျောက် technique ကို, သိခဲ့ရတယ်။ ဖဲရ်ဖီးလ်ကငါဖြစ်နိုင်လျှင်ငါ၏အဘဝတစျခုလုံးအသက်ရှင်နေထိုင်ချင်ပါတယ်ဘယ်မှာငါ၏အစံပြနေရာအရပ်ဖြစ်ပါသည်။ ငါသည်ဤ, ငြိမ်းချမ်းစွာဖော်ရွေ, ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဖန်တီးမှုမြို့သဘောကျတယ်။ "-လဲ့ဝါသနာရှင် (တရုတ်)
"mum မှာသင်နေရာတိုင်းကနေလူတွေဖြည့်ဆည်းနိုင်, သူတို့ဖော်ရွေခြင်းနှင့်မျိုးရှိပါတယ်။ ဒါဟာငါမှ လာ. တမြို့နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဒီမှာကွဲပြားခြားနားသည်။ မြို့အလွန်လုံခြုံ-သင်စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းမရှိဘဲတဝိုက်လမ်းလျှောက်နိုင်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ "-Juan Pablo Ramirez (ကိုလံဘီယာ)
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျောင်းသားတွေအများစုယခင် mum ကျောင်းသားများကိုထံမှအကြံပြုချက်များ၏ရလဒ်အဖြစ်လာမယ့်နှင့်တကွ, MSCS အစီအစဉ်ကိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှကျောင်းသားများကိုဆွဲဆောင်နေသည်။ လက်ရှိကျောင်းအပ်မျှော်မှန်းချက်သည်အလွန်နေသည်။ 135 ကျောင်းသားများကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့သြဂုတ်လ entry ကိုစာရင်းသွင်း, ကြှနျုပျတို့ယခုလေး entries တွေကိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပူဇော်လော့။
ဒီလျင်မြန်သောကြီးထွားမှု, အပိုဆောင်းအကြီးတန်းဒြေငှားရမ်းထားလျက်ရှိသည်တွေ့ဆုံရန်ပိုမိုစာသင်ခန်းကိုပြင်ဆင်လျက်ရှိသည်နှင့်ပိုကြီးတဲ့ကွန်ပျူတာသိပ္ပံအဆောက်အဦးဆောက်လုပ်ရေးအတွက်အစီအစဉ်များကိုလမ်းအောက်မှာရှိပါတယ်။ အမေရိကန်အိုင်တီစျေးကွက်ဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်နေသည်နှင့်အတွေ့အကြုံရှိ software ကို developer များရန်ဖိတ်ခေါ်နေကြသည် ငါတို့နဲ့လာပူးပေါင်းပါ.
https://compro.mum.edu/wp-content/uploads/2016_dec-01.jpg 284 462 Compro https://compro.mum.edu/wp-content/uploads/compro-web-logo-sm.png Compro2016-12-12 23:02:082019-05-31 10:57:46Times သတင်းစာစိန်ခေါ်မှုများနှင့်ကြုံတွေ့ခုနှစ်, mum ကို Safe & Friendly ဖြစ်ပါသည်
2 ၏စာမျက်နှာ 41234